तातोपानी कुण्डमा नुहाउँदा बाथ, छालासम्बन्धी रोग निको हुने बिश्वास – Sanjal Nepal
Homeसमाचारतातोपानी कुण्डमा नुहाउँदा बाथ, छालासम्बन्धी रोग निको हुने बिश्वास
तातोपानी कुण्डमा नुहाउँदा बाथ, छालासम्बन्धी रोग निको हुने बिश्वास
December 23, 2020 admin समाचार 754
सिमकाेट, ८ पुष । हिउँदको याम शुरु भएसँगै जिल्लामा रहेका तातोपानीका कुण्डहरुमा नुहाउनका लागि स्थानीयवासको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको खार्पुमा रहेको तातोपानी कुण्डमा यतिबेला नुहाउने र कुण्डमा बस्नेहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । खार्पु तातोपानी कुण्डमा दैनिक पाँचदेखि १० जना सम्म नुहाउन तथा तातोपानीको बाफ लिन आउने गरेको स्थानीय सम्झना शाहीले बताउनुभयो ।
कर्णाली नदी नजिक रहेका तातोपानीका कुण्डहरुमा महिला, वृद्धवृद्धा र बाथ रोगका बिरामीहरू बस्नेगरेका छन् । तातोपानी कुण्डमा नुहाउँदा बाथ तथा छालासम्बन्धी रोगहरुको उपचार हुने मान्याताले गर्दा हुम्लाका टाढाटाढा गाउँबाट पनि मानिसहरु आउने गरेको शाहीले बताउनुभयो । तातोपानी कुण्डमा सरसफाइ गर्न पनि सहज हुने र शरीरलाई समेत फाइदा हुने भएपछि तातोपानी कुण्ड प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
आँखा नदेख्ने आमा बुवा पाल्न रत्नपार्कमा गीत गाउने ५ बर्षे बाबुको हुने भयो गीत रेकर्ड भिडियो हेर्नुहोस !
January 13, 2021 admin समाचार 3002
एजेन्सी । एकतर्फी प्रेमको कारण एक युवकले झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको छ । फेसवुकमा भएको कुराकानीलाई प्रेम सम्झिएर युवतीका लागि उपहार लिएर जहाज चढेर गाउँ पुगेको युवकलाई युवतीले नै यस्तो हालत बनाइन् की अरुका लागि
November 24, 2020 admin समाचार 2156
सर्प भन्ने वित्तिकै आङ सिरिङ्ग हुनेगर्छ। त्यसमाथि कोब्रा सर्पको’ त कुरै नगरौं। कोब्रा देख्ने वि’त्तिकै मुटुले ठाउँ नै छोड्न थाल्छ। तर, भारतको कर्नाटकस्थित चिकमंग’लुरुको होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प देखेपछि गाउँलेको भीड लाग्यो। चमत्कारी
December 24, 2020 admin समाचार 1811
LEX 18 agenda conversation: Job club (404340)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378964)
Hello world! (314441)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (289200)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104948)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (99184)